မျိုးမြန်မာ | ဘာသာရေးအကြောင်းများ
Posted by myomyanmar on October 27, 2014
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ.	Tagged: ကျား ဘုရားကျောင်း, မေတ္တာတရား.	Leaveacomment
ကျားဘုရားကျောင်းဟာ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ အနောက်ပိုင်း ၊ ကန်ချာနာဘူရီ ပြည်နယ်ရဲ့ Saiyok လို့ အမည်ရတဲ့ ခရိုင်အတွင်းမှာ တည်ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်း တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၊ မွန်ပြည်နယ်တို့နဲ့ နယ်နိမိတ်ချင်း ထိဆက်နေတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဘုရားကျောင်း ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ စတင် တည်ထောင်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ တောရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းဖြစ်ပါ တယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာ ဘုရားကျောင်းရဲ့ အနီးနားမှာရှိတဲ့ ရွာတစ်ရွာကနေပြီး ပထမဆုံး အဖြစ် ကျားသားပေါက်လေးတစ်ကောင်ကို စတင်လက်ခံကာ မွေးမြူခဲ့ပေမယ့် မကြာခင်မှာပဲ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျားပေါက်လေး များစွာကို လက်ခံရရှိပြီး ဆက်လက်မွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာတော့ ကျားအရေအတွက် စုစုပေါင်း ၁၃၅ ကောင်ကျော်အထိကို မွေးမြူထားလျှက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ ကျားအများစုဟာ အင်ဒိုချိုင်းနားကျား အမျိုးအစားများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအပြင် ဘန်ဂယ်ကျား နှင့် မလေးရှားကျား တို့လဲ ပါဝင်ကြပါတယ်။
ထိုအပြင် အဆိုပါကျားဘုရားကျောင်းတွင် ကျားမျိုးစိတ်များစွာအပြင် အခြား သော ဥဒေါင်း ၊ သမင် ၊ ဒရယ် ၊ ဆိတ် ၊ မြင်း အစရှိသည့် သတ္တ၀ါများ ကိုလည်း မွေးမြူ ထိန်းသိမ်းထားပါသေးတယ်။
Posted in: ကိုရ်အာန်ကျမ်းဆိုသည်မှာ.	Tagged: ကိုအာန်ကျမ်း, The Bust of Quran.	Leaveacomment
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ ခရစ်ယာန်များ၊ ပြိုင်ဖက် အစ္စလာမ်ဂိုဏ်းခွဲဝင်များ၊ ယာဇီဒီများ၊ မူဆလင်မဟုတ်သူများကို မုဒိမ်းကျင့်၊ လိင်ကျွန်ပြုကြသည်မှာ ကုရ်အာန် နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၄.၃၊ ၄.၂၄) တို့အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ မူဆလင်မဟုတ်သူများ၊ ၎င်းတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဖက် ဖြစ်နေသူများကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်းကြသည်မှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၂၂.၁၉၊ ၂၂.၂၀၊ ၂၂.၂၁ ၊၂၂.၂၂) တို့အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ လွန်စွာဆိုးဝါးရက်စက်လှသည့် ကားစင်တင်သတ်ခြင်းကို ကျူးလွန်သည်မှာ ကုရ်အာန် နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၅.၃၃) အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက မူဆလင်မဟုတ်သူများ နှင့် ၎င်းတို့နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ဖက်များကို ခေါင်းဖြတ်သတ်ကြသည်မှာ ကုရ်အာန် နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၈.၁၂၊ ၄၇.၄) တို့အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများအား နိမ့်ကျသူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လိင်အဖြည့်ခံသက်သက်အဖြစ်သာ သဘောထားခြင်းမှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၄.၃၄၊ ၂.၂၂၈၊ ၄.၁၁၊ ၄.၁၇၆၊ ၂.၂၂၃) တို့အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အစုလိုက် အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ကျူးလွန်ကြသည်မှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၂.၁၉၁၊ ၉.၅၊ ၈.၆၇၊ ၇.၄) တို့အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှ (ခရစ်ယာန်၊ ယာဇီဒီ၊ ဒရူဇီ) များအား လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ကြခြင်းမှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ ကုရ်အာန် (၈.၁၇) အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်ရန် အမြဲတစေ လူသူလက်နက်စုဆောင်းပြင်ဆင်နေကြသည်မှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသည်။ ကုရ်အာန် (၈.၆၀) အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များက ကျန်ဘာသာများအား ဖျက်ဆီး၍ ထိုသူများကို အစ္စလာမ်သို့ အဓမ္မ သွတ်သွင်းနေကြသည်၊ သွတ်သွင်းလိုကြသည်မှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်ပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုရ်အာန် (၂.၁၀၃၊ ၂.၂၈၆၊ ၃.၁၉၊ ၄၈.၁၆) တို့အရ ယင်းသို့ပြုမူကြပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အသေခံဗုံးခွဲအကြမ်းဖက်ခြင်းသည် ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်မှုရှိပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ ကုရ်အာန် (၉.၁၁၁) အရ ဂျန္နသ်သို့ရောက်မည် ယုံကြည်၍ ပြုမူကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မေး >> အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ လိင်ကုန်ကူးကြသည်မှာ ကုရ်အာန်နှင့် သက်ဆိုင်မှု ရှိပါသလော။
ဖြေ >> သက်ဆိုင်မှုရှိပါသည်။ ကုရ်အာန် (၂.၁၇၈) အရ ယင်းသို့ ပြုမူကြပါသည်။
Posted by myomyanmar on October 20, 2014
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာရေး, အတုမရှိမြတ်ဗုဒ္ဓ.	Tagged: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ, ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်အမြင်, Buddha.	Leaveacomment
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ခန့်ကပင် လူသားထုကို အသိဥာဏ်အလင်းရရှိစေခဲ့ပြီး အနှောင်အဖွဲ့နှင့် ဥပါဒါန် အစွဲများမှ လွန်မြောက်စေသည့် သိပ္ပံနည်းကျ ဘာသာတရားဖြစ်သည်။ ဘာသာရေးအများစုမှာ တည်ထောင်သူ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် များ ကို ၎င်းတို့၏ နောက်လိုက်များကသာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကြသော်လည်း ဗုဒ္ဓကိုမူ ယနေ့တတ်သိပညာရှင်တိုင်းက မည်သည့်ဘာသာဝင် မဆို ၎င်းတို့၏ မူလခံယူထားသော ဘာသာကိုပင် အလေးမမူတော့ဘဲ ဂုဏ်ပြုချီးကျူးကြပေသည်။
ဘာသာတရားရှိသူများသာမက လောကကိုအလေးထားသည့် လွတ်လပ်သော တွေးခေါ်ရှင်ဆိုသူများကပက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြု ကြပေသည်။ သမိုင်းကြောင်းအမြင်အရ ဘာသာရေးလွတ်လပ်မှုသာမက လူသားတို့၏ သက်ရှင်ထင်ရှားသော ဆရာဟူ၍ တစ်စုံတစ်ယောက် မျှ မရှိခဲ့ဖူးချေ။ ဘာသာရေးကို ဗုဒ္ဓမပေါ်မီက အချို့သော ဂိုဏ်းဂဏများကသာလျှင် အပိုင်စီးထားကြသည်။ ဗုဒ္ဓသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူတိုင်းအတွက် အပိုင်းအခြားမဲ့ တံခါးဖွင့်လှစ်ထားသည့် သမိုင်းဝင် ဆရာတစ်ဆူဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓသည် တပည့်သာဝကတို့အား ငုတ်လျှိုးနေသော လူ့စွမ်းအားများကို လေ့ကျက်တိုးပွားစေခဲ့သည်။ သီအိုရီများ ယုံကြည်ချက် သက်သက်နှင့် ရိုးရာအလေ့အကျင့်ဖြင့်သာ မဟုတ်ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံဖြင့် ဟောဖော်ခဲ့သည့် ထာဝရချမ်းသာ ကို တွေ့ရှိရန် အသိမဲ့သတ္တ၀ါတစ်ဦးအား အစေခံသဖွယ် သဘောမထားဘဲ စိတ်စွမ်းအားနှင့်အသိဥာဏ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ရန် ပြသခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမများသည် ဘာသာရေး အမှတ်တံဆိပ် ခတ်နှိပ်ရန်မလိုဘဲ မည်သူမဆို လေ့ကျင့်နိုင်သည်။
အောက်တွင် ယနေ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာမှ တတ်သိပညာရှင်များအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသည့် ထင်ရှားသော တွေးခေါ် ပညာရှင်များ၊ သမိုင်းပညာရှင်များ၊ စာပေပညာရှင်များ၊ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ စာရေးဆရာများ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အဆို အမိန့် များကို စုစည်းဖော်ပြထားသည်။ သူတို့အဆိုအရ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လက်တွေ့အကျဆုံးနှင့် ကြောင်းကျိုးအညီညွှတ်ဆုံးသော ဘာသာ တရား ဖြစ်သည်။ တိကျခိုင်မာသည့် အသိပညာကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ လျော်ကန်စွာ ကျင့်ကြံအားထုတ်ပါက ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ၀န်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ပေမည်။
ဤစာစုများကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ သာလွန်မြင့်မြတ်မှုကို ပြလိုရင်းမဟုတ်ဘဲ ပညာရှင်အသီးသီး၏ အဂတိကင်းသော အမြင်များကို ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓတွင် အားလုံးသော ဟောပြောချက်များ၊ တရားသေ အယူဝါဒများထက် ပိုမိုမြင့်မြတ်သည့်အရာ တစ်ခုရှိပြီးဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမတော်သည် လူသားထုအတွက် တစ်သက်တာလုံး ရင်ကိုအေးမြစေသည်။ လူမှုဒုက္ခ သုက္ခ အရှုပ်အထွေးများအတွက် ဗုဒ္ဓ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဒေသနာတော်သည် အတိက်ကထက် ယနေ့တွင် ပို၍လိုအပ်ပေသည်။
ဗုဒ္ဓနှင့်ပတ်သက်၍ အထင်ရှားဆုံးအရာကား တည်ကြည်သည့် သမာဓိ၊ ပညာ၊ နွေးထွေးသော မေတ္တာ၊ နက်နဲသော ကရုဏာ တို့၏ ထူးကဲသော ပေါင်းစပ်မှုပင် ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓတစ်ဦးတည်းသာ လူ့သဘာဝ ကောင်းဆိုးသိစိတ်ကို ကိုယ်စားပြုသဖြင့် ယနေ့ကမ္ဘာသည် ဗုဒ္ဓဆီသို့ ပို၍ ပို၍ပင် ဦးလှည့်လာလေပြီ။
စိတ်တည်ကြည်မှုနှင့် သတ္တ၀ါအားလုံးအပေါ် မြတ်နိုးမှုကို ဗုဒ္ဓနှစ်သက်တော်မူသည်။ ဗုဒ္ဓသည် အပြစ်ဟူသော sin ကို မဟော ပါ။ အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့မှုနှင့် တွေဝေ မိုက်မဲမှုတို့ကိုသာ ဟောကြားပြီး ယင်းတို့ကို အသိပညာ၊ ကရုဏာတို့ဖြင့် ကုစားနိုင်ကြောင်းကို သာ ဟောကြားတော်မူသည်။
ဗုဒ္ဓကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်ပါ။ လူသားထုတစ်ရပ်လုံး ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာတော်သည် လူတိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဗုဒ္ဓပွင့်တော်မူပြီး နောက်ပိုင်းမှ ပေါ်ပေါက်လာသည့် ဘာသာတရားတိုင်းသည် ဗုဒ္ဓထံမှ ကောင်းမွန်သည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကို ချေးငှားရယူထားကြသည်။
ဘာသာတရားတို့၏ မိခင် အတွေးအမြင်ကြွယ်ဝသည့် အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများသည် စင်စစ် လှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်တတ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သတ်၍မူ ကျွန်ုပ်တို့အား မှန်ကန်စွာဖွင့်ဆိုမှု ပေးပါသည်။ အကြောင်းမှ ကျွန်ုပ်တို့အား လူ့သဘာဝ၏အတွင်းပိုင်းတွင် တည်ရှိနေသည့် ကိုယ်ကျင့်တရားအလှနှင့် ဖြူစင်မှု ( ၀ိသုဒ္ဓိ )ကို သိရှိစေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ရှင်သန်သည့် ဂုဏ်အသရေ အဖြစ် နိုးကြားလာစေရန် လူ့နှလုံးသားတွင် ကိန်းဝပ်နေသည့် အရာမှတစ်ပါး အခြားသော တန်းခိုးတော် ( ဖန်ဆင်းရှင် ) မလိုအပ်ကြောင်း သိရှိစေသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုပင်ဆိုဆို၊ မဟုတ်ဟုပင်ပြောပြော ကျွန်ုပ်သည် ကမ္ဘာ့ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘာသာရေးစနစ်အသီးသီး ကို လေ့လာ ဆန်းစစ်ဖူးပါ၏။ ဗုဒ္ဓ၏ အရိယမဂ္ဂင် ၈ ပါးနှင့် သစ္စာ ၄ ပါး တရားထက် ထူးကဲသာလွန်သည့် လှပစွာ ခြုံငုံမိသောအရာကို မည်သည့်ဘာသာတွင်မျှ မတွေ့ရှိရချေ။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ထိုလမ်းစဉ်အတိုင်း မိမိ၏ဘ၀ကို ပြုပြင်နေထိုင်ရသည်ကို ကျေနပ်မိပါသည်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် စိတ်ကူးယဉ်လောကသို့ ဦးမတည်ပါ
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် လောကနှင့်ဘ၀၏ တကယ်ပကတိအဖြစ်မှန်ကိုသာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရကား သဘာဝဓမ္မအတိုင်း ရှုမြင်သော ၀ါဒဟု ဆိုရပေမည်။ ၎င်းဝါဒသည် အကြောင်းအရာ ဟူသမျှကို ယထာဘူတကျအောင် လေ့လာသုံးသပ်သည်။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် စိတ်ကူးယဉ်လောက၌ မေ့လျော့ပျော်ပါးနေစေရန် မှောက်မှားသော နှစ်သိမ့်မှုကိုလည်း မပေး၊ အပြစ်များ အန္တရာယ်များကို တွေးတော၍ စိုးရိမ်သောကရောက်နေအောင် ချောက်လှန့် နှိပ်စက်မှုလည်း မပြု၊ မိမိ၏ ပကတိ အစစ်အမှန်ကို အတိအကျ ယထာဘူတကျကျ ပြောပြ၍ လုံးဝလွတ်လပ်ရေး တည်ငြိမ်ရေးနှင့် ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ရေးကို ရရှိနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပြသပေးပေသည်။
(Ven. Dr. W. Rahala)
အနာဂတ်ဘာသာရေးသည် စကြ၀ဋ္ဌာတစ်ခုလုံးနှင့်ဆိုင်သည့် ဘာသာတရား ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ဘုရားတစ်ဆူထက် သာလွန်မြင့်မြတ်ပြီး အယူဝါဒများ၊ ဘုရားသခင်၏သဘာဝနှင့် ဘာသာယုံကြည်မှု အခြေခံများကို ရှောင်ရှားလိမ့်မည်။ သဘာဝနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဓိပ္ပါယ်ပြည့်ဝသည့် ပေါင်းစပ်မှုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာသည့် ဘာသာရေးအသိဥာဏ်ကို အခြေခံလိမ့်မည်။
အသိပညာအလင်းကို လွတ်မြောက်မှု၏ အနှစ်သာရအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် သီလနှင့်ပညာကို တစ်ခုစီခွဲခြား၍ မရပေ။ မြင့်မားသောဘ၀အခြေခံကို သီလကပြုပြင်ပေးလျှင် အသိပညာက ဘ၀ကိုပြီးပြည့်စုံစေသည်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ပြည့်ပြည့်၀၀နားမလည်ဘဲ လိုအပ်သည့် ၀ိပဿနာပညာကို မပိုင်ဆိုင်ခဲ့လျှင် မည်သူ့ကိုမျှ အမှန်တကယ် စာရိတ္တပြည့်ဝသူဟု မဆိုနိုင်ပေ။ ယင်းနှင့်ပတ်သတ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာသည် အခြားဘာသာအားလုံးနှင့် ကွဲပြားသည်။ ဘုရားတစ်ဆူ တည်းသာရှိ၏ဟု ယူဆကြသော ဘာသာတရားအားလုံးပင် တစ်စုံတစ်ရာသော ဟန်ဆောင်မှုဖြင့် အစပြုကြပေသည်။ ယင်းဟန်ဆောင်မှုများကို အသိပညာတိုးတက်မှုက ဆန့်ကျင်မိသည့်အခါ ၀မ်းနည်းမှု(သောက) ဖြစ်ရပေတော့သည်။ သို့ရာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာ သည် ဟန်ဆောင်မှုဖြင့် အစမပျိုးပါ။ ကျောက်တောင်အလား ခိုင်မာသည့် အကြောင်းအရာပေါ်တွင် ရပ်တည်ပါသည်။
(Prof. Lakhsmi Narasu)
ဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည် ဘ၀မှအမြင့်မားဆုံးအကျိုးကိုရယူရန် အမြင့်မားဆုံးလမ်းစဉ်ဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက် အစီအမံ တစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။ အသိပညာ စိုးမိုးရာ အမြော်အမြင်ကြီးသည့် ဘာသာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓသည် ဘာသာပြောင်းသူများကို အနိုင်ယူရန် တရားဟောခြင်းမဟုတ်ဘဲ တပည့်သာဝကတို့ကို အသိဥာဏ်အလင်း ရရှိစေရန် တရားဟောခြင်း ဖြစ်သည်။
(A Western Writer)
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် သိခြင်း မြင်ခြင်းသာလျှင် ပဓာနဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းမှာ အရာမဟုတ်ပါပေ။ ဗုဒ္ဓ၏ ဒေသနာများတွင် “ဧဟိ ပဿိကော” ဟုပါရှိရာ “လာ၍ရှုလှည့်ပါ” ဟူ၍ ဖိတ်ခေါ်လေသည်။ “လာ၍ ယုံကြည်လက်ခံပါ” ဟု မဆိုပေ။
(Ven. Dr.W. Rahula)
စိတ်မပါသည့် ပရိသတ်အပေါ် နိုင်လိုမင်းထက် တွေးခေါ်ယုံကြည်စေခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာဖိအားပေးမှု ( သို့မဟုတ် ) မြှောက်ပင့်ခြင်း၊ လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်း၊ ချော့မော့မြှောက်စားခြင်းဟူသော ဖိအားပေးမှုတစ်မျိုးမျိုးကို အားထုတ်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ပိုင်အမြင် အစွဲအလန်းကို အနိုင်ယူခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း ဘာသာဝင်စေခြင်းသည် စဉ်းငယ်မျှ ဗုဒ္ဓဘာသာ လမ်းစဉ်မဟုတ်ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာပြုများသည် ဘာသာရေးဈေးကွက်တွင် ဘာသာပြောင်းသူများအတွက် မည်သည့် အခါမျှ ပြိုင်ဆိုင်မှုမပြုပေ။ ဘာသာဝင်တိုးပွားရန် ဈေးကွက်မလုပေ။
ပါဠိမှအင်္ဂိလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုရေးလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ပထမဆုံးပညာရှင်များတွင် ပါဝင်သည့် တစ်ဦးသော သူမှာ နာမည်ကျော် ခရစ္စယာန် ဓမ္မ ဆရာကြီးတစ်ဦး၏ သားပင်ဖြစ်သည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာထက် သူ၏ဘာသာက ပိုမို မြင့်မြတ်ကြောင်း သက်သေထူရန်ဖြစ်သည်။ သူ့ရည်မှန်းချက် အထမမြောက်ခဲ့သော်လည်း မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ကြီးမားသော . အောင်မြင်မှု ကို ရရှိလိုက်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ဦး ဖြစ်လာရခြင်းပင် ဖြစ်၏။ ဤလုပ်ငန်းကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ရန် တွန်းအားပေး ခဲ့သည့် အခွင့်သင့်မှုကို ဘယ်သောအခါမှ မမေ့သင့်ပေ။ ယင်းဘာသာပြန်ဆိုမှု လုပ်ငန်းဖြင့် အနောက်နိုင်ငံသား . ထောင်ပေါင်းများစွာ တို့အား အဖိုး အနဂ္ဃထိုက်တန်သော ဓမ္မအကျိုးကို ရရှိစေခဲ့လေသည်။ ထိုပညာရှင်၏အမည်မှာ Dr.Phys Davids ဖြစ်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာသည် အသိပညာဆိုင်ရာ အလွန်နီးကပ်ဆက်စပ်စွာ တည်ရှိနေကြောင်း မကြာမကြာ ဆိုခဲ့ပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုပါဦးမည်။
အကယ်၍ ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာလိုအပ်ချက်များနှင့်ဖက်ပြိုင်သည့် ဘာသာရေးတစ်ခု ရှိခဲ့သည်ဆိုလျှင် ၎င်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာပင် ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
ဗုဒ္ဓ၏ဟောညွှန်ချက်များအရ လောကကိုပြုပြင်စီရင်သည် မဟုတ်ပါ။ ဆုလာဘ်ပေးခြင်း ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခြင်းတို့အစား အကြောင်းအကျိုးသတ်မှတ်ချက်အားဖြင့် အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြောဆိုကြသည့် ကံအားလျော်စွာသာလျှင် ဖြစ်ရကြောင်း ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့က ယုံကြည်လက်ခံကြသည်။
ဗုဒ္ဓသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ ဘုရားသခင် ( သို့မဟုတ် ) နတ်ဘုရားများ၏ ကူညီမှု မြူတစိမျှမပါဘဲ လူတိုင်း ကိုယ်တိုင် ရယူနိုင်သည့် လွတ်မြောက်ရေးကို ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင် အဦးဆုံးထုတ်ဖော်ကြေငြာခဲ့သည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်ကိုးစားရေး၊ စိတ်ထားဖြူစင်ရေး၊ ယဉ်ကျေးပျူငှာရေး၊ အသိပညာပွင့်လင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အများအပေါ် မေတ္တာထားရှိရေးတို့ကို ဗုဒ္ဓက အလေးအနက် အခါခါ ဩ၀ါဒပေးခဲ့သည်။
ဘ၀တွင် အသိပညာမပါဘဲ ၀ိပဿနာပညာကို မရရှိနိုင်ရကား ပညာ၏မလွဲမသွေလိုအပ်မှုကိုလည်း တိုက်တွန်းဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓ၀ါဒသည် တစ်စုံတစ်ယောက်သော ဖန်ဆင်းရှင် တန်ခိုးရှင် မရှိဟု သိသောစနစ်၊ လူ့အတ္တကို ငြင်းဆိုသောစနစ်၊ ထာဝရ တည်မြဲသည်ဆိုသည့် ယုံကြည်မှုကို အမှားတစ်ရပ်အဖြစ် သတ်မှတ်သည့်စနစ်၊ ၀တ်ပြုကိုးကွယ်မှု ယဇ်ပူဇော်မှုတို့ဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟူသော အယူကို ငြင်းပယ်သောစနစ်၊ ဘ၀လွတ်မြောက်မှုအတွက် ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်ရန်မှတစ်ပါး အခြား ဘာမျှမရှိကြောင်း အစဉ်တစိုက် စောင့်ကြည့်နေသည့် စနစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ ပင်ကိုဖြူစင်မှုဖြင့် အမိန့်သစ္စာခံရန် ဘာတာဝန်မျှ မရှိကြောင်း သိရှိ၍ ကယ်တင်ရှင်၏ အကူအညီကို မည်သည့်အခါမျှ မရှာဖွေသည့် စနစ်ဖြစ်သည်။ မည်သို့သော ဥပါဒါန်အစွဲများ ရောယှက် ရှုပ်ထွေးနေစေကာမူ ယနေ့တိုင် လူသားထုအစိတ်အပိုင်းကြီးကို လွှမ်းမိုးနိုင်သည့် ဘာသာဝါဒဖြစ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်။
အပြစ် ( sin ) နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ အယူအဆ
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနေဖြင့် အပြစ် ( sin ) နှင့်ပတ်သတ်သည့်အယူအဆမှာ အခြားသောဘာသာဝင်တို့၏ အယူအဆနှင့် ကွဲပြားသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အဖို့ ( sin ) ဟူသည် တွေဝေမိုက်မဲမှု ( မောဟ ) သာဖြစ်သည်။ ယုတ်မာသူ ဟူသည် အသိဥာဏ်ကင်းမဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်၊ ပြစ်တင်ရှုံ့ချရန်လိုအပ်သူ မဟုတ်ဘဲ လမ်းညွှန်မှုများများပေးရန်သာ လိုအပ်သူဖြစ်သည်။ သူ့ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သော ဖန်ဆင်းရှင် ( သို့ ) ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်များကို ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သူအဖြစ် သဘောမထားပေ။ ဘုရားသခင်၏ သနားကြင်နာမှုနှင့် ခွင့်လွှတ်မှုကို တောင်းပန်ရယူသူအဖြစ်လည်း မယူဆချေ။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအတွက် မိတ်သင်္ဂဟ များအနေဖြင့် လူနေမှု စနစ်အတိုင်း ဆင်ခြင်တိုင်းထွာတတ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးရန်သာ လိုသည်။ ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူသည် ဘုရားသခင် ထံ တောင်းပန် အသနားခံရန် ဆုတောင်းဝတ်ပြု ကြိုးစားမှု တို့ဖြင့် အကုသိုလ်အကျိုးမှ လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟု ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတို့က မယုံကြည်ပေ။
နတ်ဘုရားများလည်း လွတ်မြောက်မှုကို လိုလားကြ
ဗုဒ္ဓသည် သက်ရှိသတ္တ၀ါများကို မညှင်းဆဲရန် နတ်ဘုရားများအထံဝယ် ဆုတောင်းပတ္တနာပြုခြင်း၊ ဘုန်းတော်ဘွဲ့များ ရွတ်ဆိုခြင်း၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းများကို မပြုလုပ်ရန် လူ့သမိုင်းတွင် အဦးဆုံး ဆုံးမပဲ့ပြင်ခဲ့သည်။ နတ်ဘုရားများ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပင် ဘ၀လွတ်မြောက်ရေး လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း မြတ်စွာဘုရားက သူ၏ဒေသနာတော်များ၌ ထုတ်ဖော်ကြော်ငြာခဲ့သည်။
(Ref:oxford research of Buddhism
:Teachings attributed to Siddhartha Gautama)
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: အစ္စလမ်ဘာသာဆိုသည်မှာ, ISIS, ISIS ၏ အကြမ်းဖတ်မှုများ.	Leaveacomment
ကုလသမဂ္ဂ အထောက်တော်များ၏ အဆိုအရ အစ္စလမ္မစ် နိုင်ငံတော် (IS/ISIL/ISIS) သည် အီရတ်နိုင်ငံအတွင်း၌ ကျွန်ဈေးကွက်များ ဖန်တီးကာ ယာဇီဒီ နှင့် ခရစ်ယန် အမျိုးသမီးများ၊ ကလေးငယ်များကို လူကုန်ကူးရောင်းဝယ်နေကြသည်။
IS များက အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး နှင့် ကလေးငယ် ၂၅၀၀ အား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့ပြီး ထို့နောက် သူမတို့အား လိင်ကျွန်ဈေးကွက်၌ US ၁၀ ဒေါ်လာ ဝန်းကျင်ဖြင့် ရောင်းစားကြသည်။
အီရတ်နိုင်ငံ၊ မိုဆူးလ်ဒေသ၊ အယ်လ်ကတ်ရှိ ကျွန်ဈေးကွက် နှင့် ဆီးရီးယားနိုင်ငံ၊ ရက်ကာရှိ ကျွန်ဈေးကွက်များမှာ IS မှ တပ်သားသစ်များ ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသော ဈေးကွက်များဖြစ်သည်ဟု ကုလသမဂ္ဂမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
သြဂုတ်လအတွင်းက IS တို့၏ ဖမ်းဆီးခြင်း ခံခဲ့ရသော မိန်းကလေးအချို့ကို ကုလသမဂ္ဂ အထောက်တော်များမှ သူမတို့၏ မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတစ်ဆင့် အဆက်အသွယ်ရရှိ စုံစမ်းမေးမြန်းခွင့် ရခဲ့ကြသည်။ အထောက်တော်များမှ သူမတို့ကို IS တို့မှ မည်သို့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခဲ့ကြသည် ဆိုသည်များကို ကုလသမဂ္ဂသို့ အစီရင်ခံစာ တင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏ စစ်တမ်းမှာ IS ၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို မျက်မြင်တွေ့ရှိသူ သက်သေ ၄၅၀ ၏ ထွက်ဆိုမှုကို အခြေခံထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သြဂုတ် ၃ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံရပြီး IS တို့၏ လက်တွင်းသို့ ကျရောက်ခံရသည့် အသက် ၁၃ နှစ် အရွယ် ယာဇီဒီမိန်းကလေးတစ်ဦးမှလည်း သူမ၏ ရင်နင့်ဖွယ် ဇာတ်လမ်းကို ပြန်ပြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမက ပြောပြသည်မှာ IS များမှ စင်ဂျာတောင်တန်းသို့ ထွက်မပြေးနိုင်သည့် ရာပေါင်းများစွာသော အမျိုးသမီးများကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။ သူမကို IS အဖွဲ့ဝင် မြောက်များစွာက မုဒိမ်းအကြ်ိမ်ကြိမ် ကျင့်ခဲ့ကြပြီး ထို့နောက်တွင် သူမအား ကျွန်ဈေးကွက်၌ ရောင်းစားခဲ့ကြသည်။
တစ်ယောက်သော ယာဇီဒီ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာမူ IS ၁၀ ယောက် နှင့် ခွဲတမ်းချခံခဲ့ရသည်။ “ကျွန်မတို့ကို ၁၀ ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ၁၂ ဒေါ်လာနှင့် ရောင်းစားတယ်” အမျိုးသမီးမှ Euronews သို့ ပြောကြားသည်။ “အမျိုးသမီးတစ်ယောက် မုဒိမ်းကျင့်ခံရလျှင် ရှက်စရာပါ ခုဟာက ၁၀ ယောက်တောင် ဆိုတော့…. သူတို့တွေက တိရိစ္ဆာန်တွေ လူတွေမဟုတ်ဘူး” ဟု သူမမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
သူမမှာ ဒေသခံစာနာတတ်သူတစ်ချို့၏ အကူအညီနှင့် ဖမ်းဆီးထားသူများလက်မှ ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ မိုဆူးလ်၌ ဘေးလွတ်ရာ ရှောင်ပုန်းလျက်ရှိသည်။
သတင်းစာမှ ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ခိုလှုံနေရသော မိဘများပေးသော ဖုံးနံပါတ်ကို ရယူပြီး IS လက်တွင်း ကျရောက်နေသော ၁၇ နှစ် အရွယ် ယာဇီဒီ မိန်းကလေးတစ်ဦးကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ခဲ့သည်။ သူမမှာ အခြားသော ယာဇီဒီ အမျိုးသမီး ၄၀ နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံထားရသည်။
“ကျွန်မတို့က IS တွေကို ကျွန်မတို့ကို ပစ်သတ်လိုက်ဖို့ ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့က သူတို့အတွက် တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့က ခဏခဏပြောတယ်။ ကျွန်မတို့က မူဆလင်တွေ မဟုတ်ဘူး၊ ကာဖိရ်တွေ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်မတို့က သူတို့ပိုင် ပစ္စည်းဥစ္စာ ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကြိုက်သလို လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ တနည်းပြောရလျှင် ကျွန်မတို့က သူတို့တိုက်ပွဲနိုင်လို့ ရလာတဲ့ ပစ္စည်းတွေ။ သူတို့ပြောတာက ကျွန်မတို့က သူတို့ ဈေးထဲက ဝယ်လာတဲ့ ဆိတ်တွေလိုပဲ တဲ့” ဟု မိန်းကလေးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: အစ်ဒ်နေ့, ၀ဋ်.	Leaveacomment
ပါကစ္စတန်တွင် အဒ်နေ့များအတွင်း အမည်မသိ မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီး သေနတ်သမားများက လူ ၁၁ ဦးအား အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံသို့ ဦးခေါင်း၊ ရင်ဘတ်တို့၌ သေနတ်ဒဏ်ရာများဖြင့် သွေးအလိမ်းလိမ်း ပို့ပေးလိုက်သည်။
အဒ်နေ့၌ပင် ပါကစ္စတန်နှင့် အိန္ဒိယ နယ်ခြားစောင့်တပ်များ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ပါကစ္စတန် ကက်ရှမီးယား နယ်သား ၃ ဦး၊ အိန္ဒိယ ကက်ရ်ှမီးယား နယ်သား ၂ ဦး တို့က ကျည်ဆံဒဏ်ရာများဖြင့် အလ္လာဟ်အား အသက်ပေး ပူဇော်သွားကြသည်။ တစ်ပတ်ကျော်အတွင်း အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ထံ ရောက်ရှိသူ ပါကစ္စတန် မူဆလင် ၉ ဦး၊ အိန္ဒိယ မူဆလင် ၈ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တူရကီတွင်လည်း ဆန္ဒပြမှုများအတွင်း အဒ်နေ့၌ ကာ့ဒ် ၂၁ ဦး အလ္လာဟ်အား အသက်ပူဇော်သွားသည်။
ပါကစ္စတန်တွင် လက်လုပ်ဗုံး တစ်လုံးပေါက်ကွဲပြီး အလ္လာဟ်အား ၎င်းတို့အသက်ဖြင့် ယဇ်ပူဇော်လိုသော မူဆလင် ၃ ဦး ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်သည်။
ဗဟိုအာဖရိကနိုင်ငံတွင် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား အလ္လာဟ်အား အစ္စမေးလ်ကဲ့သို့ လည်ချောင်းသွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော်လိုသူ မူဆလင်တစ်ဦးက ခရစ်ယာန်များအား စော်စော်ကားကား သွားလုပ်ရာ ခရစ်ယန်များက ၎င်း၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်ပေးသည့်အနေဖြင့် ခေါင်းဖြတ်၍ အလ္လာဟ်အား ပူဇော်လိုက်ရုံမက မီးပါရှို့ပေးလိုက်သည်။
Credit : Myo Min Thant
Posted in: မွတ်စလင်ကုလားယုတ်များ, အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: ဝဋ်ဆိုသည်မှာ, ၀ဋ်ကြွေး.	Leaveacomment
ဗလီဆရာတစ်ဦး ကိုယ့်အတတ်ကိုယ်စူး၊ ကိုယ့်ဗုံးကိုယ်ခွဲမိ၊ မိခင်ပါသေဆုံး
အာဖဂန်နစ္စတန်အရှေ့တောင်ပိုင်း ပတ်တီကာပြည်နယ်တွင် ဗလီဆရာမူလာတစ်ဦးသည် ၎င်းကိုယ်ပိုင်ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများဖြင့် ၎င်းကိုယ်ကို ဖောက်ခွဲမိကာ ၎င်းနှင့်အတူ ၎င်း၏မိခင်ပါ သေဆုံးသွားသည်ဟု ဒေသအာဏာပိုင်များက အောက်တိုဘာ ၈ နေ့က ပြောကြားသည်။
ဗလီဆရာ မော်လဝီ ရှုရာတူရာသည် ၎င်း၏ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၌ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ထားပြီး ၎င်းဆိုင်ကယ်ဖြင့် ဆွေမျိုးများထံအသွား လမ်းတွင် ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းပေါက်ကွဲမှု၌ ဗလီဆရာနောက်မှ လိုက်ပါသွားခဲ့သူ ၎င်း၏မိခင်ပါ သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
၎င်းဗလီဆရာသည် တာလီဘန်အုပ်စုနှင့် အချိန်အဆက်ရှိပြီး အကြီးစားလမ်းဘေးဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ၌ ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မူဆလင်တွေကို လောကပါလနတ်တွေက ဒဏ်ခတ်နေပြီ! မူဆလင်တွေရဲ့ သတ္တဝါတွေကို လည်လှီးခေါင်းဖြတ်တဲ့ အကုသိုလ်ကံတွေက လက်ငင်းအကျိုးပေးနေပြီ!
အစ်ဒ်နေ့ အလ္လာဟ်အား ယဇ်ပူဇော်မှုအဖြစ် သိုးအားလိုက်သတ်စဉ် သိုးလွတ်မြောက်၍ လိုက်သတ်သူ မူဆလင်သေဆုံး
ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံတွင် အစ်ဒ်နေ့က အလ္လာဟ်အား ယဇ်ပူဇော်ရန်အတွက် အသက် ၅၀ အရွယ် မူဆလင်တစ်ဦးမှ သိုးအားသတ်မည်ပြုစဉ် သိုးထွက်ပြေးသဖြင့် ၎င်းသိုးအား လိုက်သတ်ရာ သိုးလွတ်မြောက်သွားပြီး လိုက်သတ်သူ ၎င်းသာ အမောဆို့ သေဆုံးသွားသည်။
၎င်းအဖြစ်အပျက်မှာ ဆော်ဒီအာရေဗီးယားနိုင်ငံ၊ ပင်လယ်နီ ဆိက်ကမ်းမြို့ ယန်ဘူ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းမူဆလင်သည် သိုးကိုသတ်၍ အလ္လာဟ်အား ယဇ်ပူဇော်ရန် ဓားကို မြနေအောင် သွေးသည်။ ထို့နောက် ၎င်း၏ အိမ်အနီး၌ သိုးကိုသတ်ဖြတ်ရန်အလို့ငှာ ကြိုးတုတ်သည်။ သို့သော် ထိုအခိုက် သိုးမှ ထွက်ပြေးသည်။
သိုးမှ ဥယျာဉ်ကျယ်ကြီး တစ်ခုအတွင်း ဝင်ပြေးသည်။ ထိုသူက နောက်မှလိုက်သတ်သည်။ သို့သော် နောက်ပိုင်းတွင် သိုးနောက်သို့ လိုက်နေရင်း မူဆလင်မှာ ပုံလျက်သား လဲကျသေဆုံးသွားပြီး သိုးမှာ လွတ်မြောက်သွားလေသည်။